स्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनु हुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस – Ekathmandunepal
Homeब्लगस्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनु हुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस
२ पुष २०७४, आईतवार १४:२३ ekathmandu Nepal ब्लग 0
एजेन्सी- के म मेरो पति र परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु ? अक्सर नव-दुलहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो। र, यो स्वभाविक पनि हो । जब बुहारी बनेर अर्को घरमा प्रवेश गरिन्छ, सबै कुरा नौला हुन्छन्। परिवारका सदस्य, त्यहाँको वस्तुस्थिती, परिवारको रहनसहन, बानी व्यवहार, चालचलन भिन्न हुनसक्छ। अर्थात आफु हुर्किएको पारिवारिक वातावरणसँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नव-दुलहीले आफुलाई फरक परिवेश, फरक रहनसहन, फरक व्यक्तिहरुमाझ समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
परिवारको रहनसहन बुझेर आफुलाई त्यही अनुरुप प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय बुहारी यस्ता पनि हुन्छन्, जसले परिवारले मान्दै आएको संस्कार अंगाल्न चाहँदैनन्। यसले परिवारमा कलह हुन्छ। तर, कति बुहारी यस्ता हुन्छन्, जसले परिवारलाई थप सुमधुर र बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छन्।
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (1,006)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (770)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (406)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (371)
सेक्स पावर” तुरुन्तै अत्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी (351)
यौन सम्पर्कको बेला ध्यान दिनु पर्ने १० कुराहरु (324)
यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेर्नु सहि कि गलत ? (274)
फिल्ममा आउँनु अघि यस्ता थिए नेपाली चलचित्रका चर्चित… (243)
एक कोरियन युवतीको योनीको रौ फालिदि गरेको दृश्य… (5,493)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,437)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,287)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,821)
जंगलमा महिलासंग यौन क्रिडा गरिरहेको भिडियो भाइरल… (2,685)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,595)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,424)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,392)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,355)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,234)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,232)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,225)
सामाजिक संजालमा फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक… (2,224)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (2,034)
“भाउजु, कति दिन तड्पेर बस्नुहुन्छ ? आज म तपाईंको… (1,978)